Snazzy titre asa vaovao sy karama vaovao ao amin'ny AIM: talen'ny fanavaozana
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Snazzy titre asa vaovao sy karama vaovao ao amin'ny AIM: talen'ny fanavaozana
AIM Group International, orinasa manerantany ao kongresy, hetsika ary fifandraisana, nanambara ny fametrahana toerana stratejika vaovao, miaraka amin'ny fanendrena an'i Annalisa Ponchia ho talen'ny fanavaozana sy ny traikefa ho an'ny mpanjifa. Ilay matihanina efa zokiny sy fanta-daza dia notendrena hitarika fanavaozana amin'ny asan'ny orinasa rehetra ary hampiakatra ny sanda fanampiny natolotra ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny traikefa iraisam-pirenena mandritra ny 30 taona amin'ny hetsika sy fitantanana fikambanana, Annalisa Ponchia dia manana fakany lalina amin'ny indostria ary nandamina fihaonambe sy hetsika eran'izao tontolo izao ho an'ny sehatry ny orinasa, governemanta ary fikambanana. Amin'ny maha Chief Chief Executive of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) nandritra ny 12 taona mahery, dia niara-niasa akaiky tamin'ny Society izy mba hampivelatra sy hanome ny vina stratejika, ao anatin'izany ireo tetikasa fiaraha-miasa amin'ny indostrian'ny pharmaceutika, hetsika fanangonana vola, marketing ary fifandraisana. . Raha ny marina, vao haingana izy no noderaina indrindra ho talen'ny Executive tamin'ny taona tao amin'ny Associations Awards 2019.
Miara-miasa amin'ny Biraon'ny ESOT sy ny ekipany izy, nandamina ny hetsika ara-tsiansa sy fanabeazana rehetra nataony, ao anatin'izany ny Kongresy roa taona (izay manintona matetika ny mpanatrika 4,000), namorona endrika vaovao vaovao izy, nanatsara ny teknolojia miseho ary ny teknika ianarana. Teo aloha dia nanana traikefa 10 taona nitantanana ny orinasany PCO manokana izay niompana tamin'ny fivoriana fitsaboana izy.
Ponchia dia matihanina amin'ny fivoriana voamarina, miaraka amin'ny fanondroana CMP sy CMM, ary mpikambana ao amin'ny Birao amin'ny fikambanan'ny indostria toa ny AC Forum, PCMA EMEA ary ny IPCAA Compliance Task Force, ary miasa am-pitenenana amina hetsika amin'ny orinasa sy orinasa maro.